Ciidamo ka tegay Garowe oo gaaray Waqooyiga Gaalkacyo - Hablaha Media Network
Ciidamo ka tegay Garowe oo gaaray Waqooyiga Gaalkacyo
HMN:- Sida aan ku heleyno wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo, Ciidamo katirsan kuwa maamulka Puntland oo xalay kasoo ruqaansaday magaalada Garowe, ayaa gaaray aqooyiga Gaalkacyo.
Ciidankan oo ah kuwo aad u farabadan, ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha guud ee ciidanka Puntland Jen. Saciid Maxamed Xirsi.
Ciidankaan gaaray Gaalkacyo ayaa kusoo aadaya xilli dagaal u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug uu ka taagan Magaalada Gaalkacyo.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in xaalada ay maanta tahay mid aad u xun , waxaana xalay magaalada ka baxay dadkii ugu dambeeyay shacabka ahaa kuna sugnaa labada dhinac oo ay ka kala taliyaan maamulada Puntland iyo Galmudug.
Ciidamada Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa isku horfadhiya Galbeedka Magaalada Gaalkacyo, waxaana la sheegaya in ay qarka u saaran yihiin in ay isku dhacaan.